Arenal Villa Mara kunye Pool yabucala, Jacuzzi & A/C - I-Airbnb
Arenal Villa Mara kunye Pool yabucala, Jacuzzi & A/C
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguJason
Le villa intle, ithokomeleyo enombono omangalisayo we-arenal volcano ibekwe ngaphandle nje kweLa Fortuna, iibhloko ezimbalwa ezikude nedolophu. Ukuthuthuzela kwakho izinto zendlu: ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlala, i-sofa, i-Wi-Fi enesantya esiphezulu, igumbi lokulala eli-2 elinebhedi enkulu, i-A/C, iTV enye kwigumbi lokuhlala kunye nentambo kunye nezithethi zeBluetooth, ngokunjalo. umhlambi nomomisi. Igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye nezinto zangasese. Ngasemva iyadi ineebhafu ezitshisayo zamatye, iphuli engapheliyo, ibha yokuqubha, umgangatho welanga kunye neeshawari zangaphandle.
Ikhitshi kunye neDining-Ukwenzela intuthuzelo yakho ikhitshi ixhotyiswe ngezixhobo zombane ezibandakanya ifriji yobungakanani obugcweleyo, imicrowave, oveni kunye noluhlu oluphezulu, iblender, ikofu, itoaster, kunye nekhitshi kunye nezinto zesilivere.
Igumbi lokulala / Igumbi lokuhlambela- Igumbi lokuhlambela eligcweleyo elinamanzi ashushu libandakanya izinto ezisisiseko ezifana nephepha langasese, isepha, ishampu, i-conditioner, kunye neetawuli. Ishawa yamatye yenzelwe ukunika amava ezinto eziphilayo. Ibhedi enye inokusetwa, ngesicelo.
Iphuli-Ichibi kunye nebhafu eshushu zezinye zezona zinto zibalaseleyo kule villa itofotofo. Iqula elingenasiphelo elinomphetho wethayile kunye nebha yokuqubha ilindele iintsuku zakho ezinelanga. Ibha ifakwe kwiiplastiki eziyimfuneko kwaye inefriji yayo. Kukho indawo yokuhlala eyaneleyo ejikeleze ibha kunye nedekhi yephuli yokonwabisa abahlobo kunye nosapho.
Ibekwe ecaleni kwechibi kukho ithayile entle eshushu ibhafu enokuhlala kamnandi kwisibhozo. Kukho iindawo zokuhlala ezongezelelweyo ecaleni kwedama ukwenzela imisebenzi eyongezelelweyo.
IWasher kunye neDryer-Njengenxalenye yezinto eziluncedo, iVilla inendawo eyaneleyo yokugcina enewasha kunye nesomisi. Iinkonzo zokucoca kunye nenkonzo yomkhonzazana inokongezwa kwindawo yakho yokuhlala ukuba ukhetha.
Iibhedi ezinkulu eziyi-2, 1 iisofa eziyi-, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
Iibhedi ezinkulu eziyi-2, 1 iisofa eziyi-, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
4.94 · Izimvo eziyi-175
Izimvo eziyi-2 941
UMnikazi kunye noMamkeli wakho:
Umnini wale Villa yobunewunewu, uNicole A. Perez, wawathanda amahlathi ashinyeneyo aseCosta Rica ebudeni bohambo lwakhe lwehlabathi. Kwaye waziva ngathi uyabanda uphinda amava okuba seMasai Mara eKenya ngokwenza indawo evulekileyo, ephilayo neyendalo kwesi siqwengana somhlaba.
Umamkeli wakho wokuhlala uya kuba nguJason Rodriguez, ungumphathi wepropathi uVilla Mara kwaye unokukhathalela yonke imfuno yakho, imozulu yogcino lwalo lwemisebenzi yangaphandle, uhambo lwegrosari okanye umbuzo malunga nevilla, Uhlala eyimizuzu nje okanye umnxeba kude.
Umnini wale Villa yobunewunewu, uNicole A. Perez, wawathanda amahlathi ashinyeneyo aseCosta Rica ebudeni bohambo lwakhe lwehlabathi. Kway…